Xildhibaano katirsan Barlamaanka Somaaliya oo gaaray Balad Weyne – Radio Daljir
Janaayo 19, 2018 12:22 g 0
Xildhibaanadaan oo isugu jiray labo Senator oo katirsan Golaha Aqalka sare iyo Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka ayaa Deegaano katirsan Gobolka Hiiraan ku maraya Qiimeyn iyo Indha indheyn ay ku sameynayaan deegaano dhaca Gobolkaasi.
Safarka Xubnahaan ka kala socda labada Gole waxa ay ka bilaabeen Magaalada Balad Weyne, iyagoona gaaray Deegaanka Far-libaax oo 45km dhinaca Galbeed ka xigta Magaalada Balad weyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
Wararku waxa ay sheegayaan in deegaankaasi ay u gaareen sidii ay usoo qiimeyn lahaayeen Xaaladda ka jira Deegaanka, tan Maamulka iyo sida ay u howlgalaan Ciidamada halkaa ku sugan.
Kulamo ayaa lagu wadaa in ay la qaataan Maamulka Far-libaax iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada, waxayna kala yihiin Xildhibaanada iyo Senatarada Far-libaax Gaaray:-
Senotar Cismaan Axmed Macoow.
Senator Nimco Ibraahim Yuusuf.
Xildhibaanad Maryan Axmed Haaruun.
Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed.
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar.
Deegaano katirsan Gobolka Hiiraan ayee safaro kala duwan ku mareen Xubnahaani, si ay usoo qiimeeyaan Xaaladaha ka jira, qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka Deegaanka ayee kula kulmeen deegaanadii ay tageen.
Ujeedkooda ugu weyn waxa ay ku sheegeen Xildhibaanada iyo Senetarada in waxyaabaha ugu soo baxo safarkooda ay la wadaagaan Gudoonka Baarlamaanka kolka bisha Soo socoto ee February uu ufurmo Kalfadhiga 3-aad.